Madagasikara tena lomorina | Tokinao
« Valin-tagy tsy manalagy [efa misy anarana miisa 86] | Main | Fa ny fitiavana no lehibe indrindra* :) »
Mahakivy tokoa indrindra fa olona toa anao tsy zatra ny zava-misy eto aminay (raha tianao: eto amintsika)sendra mandalo no sendra ny toa ireny.
Mampametra-panotaniana hoe: tena fisainan'ireny olona ireny ve izany sa voatery ny zava-misy koa izy?
Fa izao: "Aza kivy"! tsy izany akory no anariana tanindrazana. Tena mila olona toa anao ny firenena, izay mahatsapa ny tsy mety. Raha sendra any amin'ny fanjakanao any ianao (asa ahafahanao manampy olona) dia aza manao ny tsy mety ataon'ny hafa. Raha mety dia hafaro taranaka faramandimby ny maharasty izany fomba izany.
Raha manao izany daholo ny rehetra, angamba any amin'ny taranaka manaraka any mba efa vitsy sisa no manana izany toe-tsaina izany.
Miandalana anie ny fampandrosoana e! tsy mbola tara
Posted by: TIABESERA at 2009/08/02, 07:49
Mino aho fa mbola azo arenina i Madagasikara satria mbola misy ny olona toy io namanao io tsy tia risoriso. Misy maro hafa koa any torak'izany. Tsy ny fandosirana ny tanindrazana ny vahaolana fa ny fanovana ny toe-tsaina amin'ny alalan'ny fanomezana ohatra tsara eo amin'ny fiarahamonina. Sao dia tokony hojerena ihany koa ny zava-misy iainan'ireny mpiasam-bahoaka ireny? Tsy mora ny mitazona endrika miramirana rehefa reraky ny asa nandritra ny tontolo andro sady mieritreritra izay hohanina ny anio. Kely loatra mantsy ny karaman'izy ireo, afaka mampitaha ny any amin'ny sehatra tsy miankina isika manamarina izany.
Ka vonona ve ny vahoaka hanova toe-tsaina dieny izao fa tsy hiandry ny taranaka faramandimby?
Posted by: Nirilala at 2009/08/02, 08:58
Génération iray manotolo mits no pourrie
Posted by: Kdaombaramita at 2009/08/02, 11:54
tena mampalahelo nefa atao ahoana e!
Posted by: Maeva74 at 2009/08/02, 16:41
Ny momba an'io tokoa aloha dia tsy hita hoe atao inona intsony, fa dia azo atao hoe toy ny vay an-kandrina, ka sady maharary no mahamenatra.
Satry ihany hilaza hoe "tsara toetra ny Malagasy" na koa hoe "tsy mena-mitaha amin' ny any ivelany ny Malagasy", kanefa raha mijery ny zava-misy amin' ny fiainana andavanandro isika dia ireo voalaza ireo ambony ireo no izy.
Posted by: LeRastah at 2009/08/02, 20:34
Izaho aloha dia efa im-betsaka no tratra ny zavatra toy izany isaky ny mankany Mada ka manamboatra taratasy. Tao amin'ny domaines moa dia ilay mpiasam-panjakana nantonina dia mamaky gazety, ary takonany amin'ilay gazety ny tarehiny. Rehefa afa-po izy dia nanatona ilay varavarankely hifampiresahana ary tsy nanontany na inona na inona fa tonga dia nijery toa an-dramatra. Rehefa nomeko azy ilay taratasy teny amiko dia nojereny ary natsipiny dia hoy izy hoe, rahampitso miverina, vao amin'ny iray sy sasany io ary izy to tsy manao na inona na inona satria namaky gazety tamin'ny nahatongavanay teo.
Tao amin'ny Domaines ihany. Rehefa avy nilahatra ela dia toa ny nahazo an'ilay Ranamana nitantara io. Nony tonga ny tamin'ny roa ambin'ny folo, dia nitsahatra ny fandraisana. Tsy nisy nilaza taminay hoe hisintaka kely, fa toa nivoaka tany amin'ny varavarana miafina tany ilay olona dia tsy hita. Tamin'ny roa hariva tsy nisy fandraisana, lasa ny tamin'ny telo, tsy nisy ihany. Tamin'ny telo sy sasany ilay olona vao tonga. Tsy naharitra aho ka hoy aho taminy hoe, mpiasam-panjakana anie ianao Andriamatoa koa nahoana no ataonao ohatra izao izahay. Ningonongonona fotsiny izy, asa izay nolazainy fa tsy dia tiako ho fantatra ihany koa.
Tao amin'ny biraon'ny polisy ao Tsimbazaza indray, hanolo kara-panondro very aho niaraka tamin'ny rahavaviko izay mipetraka ao Tana. Dia narirariran'ilay vehivavy tao. Nolazaiko azy fa tany Toamasina no nomena ny karatra voalohany ary mazava izao fa voatahiry "par ordre alphabétique" ny karatra rehetra ao. Ndana aloha ianao mandeha hoy izy fa mbola ho tadiavina ilay izay ka rehefa afaka adiny iray miverina. Tena mahakivy mihitsy ity mampiverimberina olona ity. Nony niverina aho dia eo indray Ramatoa nanontany ny anarako, dia nadray stylo ary nanoratra ilay anarana efa nomena azy teo aloha, di anampiany h ilay izy ary nony nilazako izy hoe tsy misy h fa ilay nosoratanao tamin'ny voalohany iny efa marina. An an, hoy izy, tsy hitako tao io. Dia lasa izy nikaroka to amin'ilay vata sarihana, dia nijery, dia nataony fanahiniana natambatra ilay karatra rehefa tonga teo amin'ny anarako dia voadingana. Nanomboka narary fo toa an'ilay naman'i Tokinao aho nefa tsy hitako izay atao sao lasa miteny an-kasosorana eo. Nony farany izy dia hoy izy hoe 50000 izay no mba omenareo ahy. Dia sanahabe be teo aho. Dia hoy ilay rahavaviko nibitsibitsika tamiko hoe, tsy ho vita io karatrao io raha tsy omena kely izy. Dia nomeko azy ny teny amiko na tsy tiako azy ny manao izany. Nony vita ary ny tokony atao tao aminy, dia hoy izy tamiko hoe: Halako ny ahy ny olona mahihitra toy itony an.
Tamin'ny farany teo dia nararaotina ny nandehanana tany hanaovana an'ilay passeport biométrique. Indray andro maninjitra koa ny tao, nanomboka tamin'ny fito maraina dia tamin'ny efatra sy sasany vao afaka tao. Mba vita soa aman-tsara ihany aloha fa dia fotoana very.
Ilay ao amin'ny Domaines dia misy olona avy any ambanivohitra tonga vao maraina be ao dia tsy mahavita izay ataony iny andron'iny. Aiza moa ny toe-karena no tsy hikorosy.
Ilay fiavonavonan'ny mpiasa tena mandreraka be mihitsy. Ny olona mantsy te hahavita ny raharaha hataony dia manambitamby fa raha tsy izany hono dia mihitsoka eo ilay raharaha.
Raha ohariko amin'ny toerana misy ahy amin'izao fotoana izao dia mampitomany mihitsy ny mahazo ny olona any Mada. Tsy misy an'izany hoe miverena amin'ny herinandro, amin'izay tsy fantatra na ho vita koa ilay izy rehefa miverina ianao. Ny fandraisana olona izany moa, dia aoka fotsiny.
Amin'ny mpiasam-panjakana moa dia toa efa tandra vadin-koditra io fiavonavonana sy tsy firaharahana olona io. Tsy manao aho hoe izy rehetra, fa toa izay nalehako rehetra, na tany Toamasina aza, dia toa io daholo. Ny mpivarotra koa indraindray, indrindra fa ny sinoa, dia manao tsinontsinona ny mpividy, tena mahagaga mihitsy fa izy tokony handray anao mitondra vola ho azy indray no miavonavona. Misy iray tany Toamasina izay moa dia tsy niraharaha izay mpividy teo izy fa nojereny fotsiny izahay dia nitodihany lamosina ary ilay fandaminana mofo izay tokony hotohizany avy mandray anay no nataony. Izahay moa dia lasa koa.
Tsy fantatro ny any amin'ny faritra hafa fa raha ny hitako tao Antananarivo sy Toamasina dia nampiaiky ahy ny fiovan'ny toe-tsain'ny olona. Mila fiovana sy fivoarana be dia be tokoa, kanefa io toe-tsaina io tsy mampivoatra mihitsy, satria sakana eo amin'ny toe-karena (ny olona very fotoana (ny tokony hiasana lany hiandrasana ny sitrapon'ny tsy mieritreritra), sakana eo amin'ny fiaraha-monina (fankahalana), sakana eo amin'ny fahasalamana (fahasorenana, fahatezerana), ny efa mahantra koa mbola terena hanome izay kely ananany ho an'ny tsy mahataho-tody.
Mbola ho ela hoy aho vao ho tafarina. Fa aza manary toky sy mamoifo fotsiny aloha e.
Posted by: Su at 2009/08/02, 22:08
Asa na hatrany an-tampony any ilay fandraisana tsolotra, fa raha izay fanentanana izay anie ka efa mba betsaka ihany e! Na aiza na aiza io fitadiavana tsolotra io! Fa rehefa isika itakiana no tsy mety manome dia tsy misy azon'izy ireo atao.
Posted by: ari.malala at 2009/08/03, 11:32
Mampalahelo zany r'ise ! Asa raha hisy fiovana na tsia ! (-:
Posted by: fahamarinana at 2009/08/03, 12:53
Courage foana é!
Aza kivy fa mila fanovana izany rehetra izany nefa iza moa no andrasana ?
Posted by: DadaRabe at 2009/08/03, 13:09
Ho an'i ari.malala
Ekeko mihitsy ilay hevitra hoe tokony tsy hanome ilay itakiana (nanao izany tokoa aho taloha talohan'ny nialako tany Mada), fa amin'izao fotoana ilay olona anie ka tsy afa-manaotra e. Hoy ianao hoe tsy misy azon'izy ireo mpitaky atao raha toa ka tsy manome isika itakiana. Misy tokoa ny azon'izy ireo atao, ary ampiariny, dia ny mampivezivezy anao andro aman'alina, tsy mikarakara ny taratasinao, mikitakita, manambany sy ny sisa rehetra. Mafy anie izany te-hahavita raharaha izany e. Indrindra raha avy any ambanivohitra ianao ka voatery hiverimberin-dava. Tsy manome rariny ny mpitaky tsolotra aho akory sanatria, na manampy ny mpanome tsolotra koa, fa ny tiako holazaina dia ny hoe rehefa tsy afa-manoatra ny olona dia voatery tsy fidiny hanao izay tokony tsy hataony. Ireo mpitaky tsolotra maty eritreritra ireo no tokony mba hijery hoe hatraiza ity fitiavan-tenany ity. Nefa asa moa, ny olona tonga amin'izany tanjona izany ve mbola manana'eritreritra hatokana ho an'ny be sy ny maro? Mampalahelo, mampitomany e.
Posted by: Su at 2009/08/03, 16:42
MIfanohitra amin'ny voalazanareo ity itako ity indray. Milaza izany fa tsy ny rehetra no manao izao toetra mamoehatra itanareo izao. Misy ihany ny tsara ary hiderako azy ireo izany. Ity indray dia tao amin'ny birao fangatahana ttsy mahamalagasy no niseho.
Posted by: kdaombaramita at 2009/08/04, 14:45
tena voafainty tanteraka ny bandy :)
za efa tena hoe: kay le, raToky ve ity?
ny blaogy asa feno madagasikara kely bedabe... tena nisy fiovana ambongadiny mintsy tany... blonde tsara soratra, dia manary ny akoho mavon-drazana loooooolll
soa ihany fa tsy izy :)
zao tenenina an'le olona hoe: ny olana natao hovahaina fa tsy natao hitsoahana. Tsy ny hoe maha-malagasy fotsiny fa toe-tsaina tsara ananana izany, ady ny fiainana tsin... sady raha mianjera tanteraka anie i Dago, harary fo ihany ee...
atsipy ny teny antandroky ny omby, atsipy ny vilia vaky
Posted by: simp at 2009/08/05, 19:31
Marna tsy misy azo kianina ireo notantaraina ireo, ary ny tena mampalahelo dia ny olona tsy tia manao risoriso no lazaina fa adala.
Tsy vao izao akory no nahenoana an'io fa efa hatramin'izay.
Torohevitra no arosoko anareo, efa im-betsaka aho no tratra toy io fa ny fanafodiny hitako dia ny fitondrana fakan-tsary na ny tena tsara dia camera, alaina sary na filmena ny tompon'andraikitra tsy manara-dalana, dia atao hitany tsara mihitsy, @ izay matahotra dia manaja ny asany.
Tsotra io ary efa nahomby indrindra fa ireo zandary sy polisy manao tsolotra eny an-dalana.
Posted by: naritsimba at 2009/08/07, 14:02
Mbola aiza e!
Tena mampieritreritra ahy ity lahatsoratrao ity misy ho tsako2na tsara mihitsy!
Vao eo zao ny mpamory hetra no nandalo tato @ biraoko oe aloavy ilay paika raha tsy izay ankatona ny asanao! lol
Mbola sahirana a wa ny toedraraha iarahana malala ko sazy inona no omena ahy eo!
Aza mody aty intsony izany fa fiainana alika ny aty!
Posted by: news2dago at 2009/08/13, 09:55
Mampalahelo ahy ny toe-tsain'ilay nanoratra tany aminao, rehefa tsy tiany fotsiny ny maha-gasy azy dia aza mody varoty ny taniny aty dia mividiana any, aza miaino ny vaovao aty dia aza makaty tsony fa mifindra monina, eto any daholo ny fianakavianao aza asiana tamingany akory aty,, ny olona iray mba hitany tsy mety no tsy tiany, dia ny vahoaka sy ilay gasikara no maharikoriko azy. Adala-bazaha nefa gasy mainty.
Ampahafantaro azy toki fa ny gasy a, azo hiresahana tsara, azo ovaina ny toetrany satri mitovy ny fomba fiteny, fa mifampiraharaha any ivelany any raha izay no mahafatifaty azy.
news2dago> fiananareo aty irery no alika fa ny anay milamina tsara.
Posted by: TIAKOIGASIKARA at 2009/08/14, 06:55
Tiakogasikara => k'hita ko! lol
Posted by: news2dago at 2009/08/14, 18:30
Mandrevy BE i Tiakogasikara raha miheritreritra hoe gasy iray na roa na telo no manao fisainana toa ireny!
Ny fitianvan-tanindrazana tsy midika "aveuglement sur la situation locale".
Utopique be ny valiteninano par rapport à l'histoire racontée sy ny témoignage hafa voatantara eo ambony.
Tia gasy sy tia Madagascar aho fa tsy midika idéalisation bête ny fitiavan-tanindrazana.
Au contraire, il faut faire un constat honnête pour avancer (dia aza mimenomenona hoe nasiako teny frantsay ilay valiny!)
Posted by: Apocalypsenow at 2009/08/27, 08:38
Mbola ho an'i tiakogasikara ihany lol be+mdr ilay hoe "Ampahafantaro azy toki fa ny gasy azo hiresahina tsara, azo ovaina ny toetrany" : ndana manandran manao taratasy, manandrama ministère iray na roa, ny tribonaly eo Anosy feno "magistrat" mihitsy andramana (ny masoko izao no nahita!!) dia ho hitanao eo hoe firy ny gasy "azo resahina tsara".
Misy gasy azo resahana tsara = marina izany fa tsy any @ birao no misy azy;
nefa leiu de pouvoir ireny ka raha any no mi-coince dia ho aiza ianao??
Posted by: Apocalypsenow at 2009/08/27, 08:46
apocalypsenow> vao t@ herinandro mihintsy za no nakao @ tribonaly, milamina tsara, tsy misy olana, vetivety dia tafavoaka, fa rehefa nodinihina, dia ny sainareo mihintsy no voa.
Vakio tsara ny voalazany, hoy izy:"...ny gasy dia sauvage.......ozinina famonoan'olona.....". Rehefa tsy te-ho gasy fotsiny izy tsy mila mikabary be eo, a tsy azoko mintsy ny himenomenomana. Raha hendry tsy mianatr tsara dia mody manova ny indro kely aty fa be wawawa eo.
Posted by: tiakogasikara at 2009/08/31, 13:29
Misaotra antsika rehetra fa mahafinaritra ny fanehoan-kevitra ataonareo sady ahafantaran-javatra!
Posted by: Tokinao at 2009/09/04, 15:35
Inty ilay izy fa adinoko tetsy ambony (MIfanohitra amin'ny voalazanareo ity itako ity indray. Milaza izany fa tsy ny rehetra no manao izao toetra mamoehatra itanareo izao. Misy ihany ny tsara ary hiderako azy ireo izany. Ity indray dia tao amin'ny birao fangatahana ttsy mahamalagasy no niseho.)ny nametraka azy na voafafa :
Posted by: Kdaombaramita at 2009/09/23, 06:45
Hum, tena lomorina an !
Fa taiza foana ary nefa mbola tsy mahita tantaraina koa manginy fontsiny! Tsy maintsy milaza vaova r'angahy ianareo a ;)
Posted by: Kdaombaramita at 2009/10/01, 18:22
Fijery hafa hitako tany ho any :
"JE SUIS MALGACHE MAIS JE NE SUIS PLUS LE PEUPLE"
Posted by: Jereo ato koa at 2009/10/11, 10:01
Misy zavatra roa misongadina kosa tsara avahana amin'ilay resaka napetrak'ilay malagasy sendra nandalo.
2-Ny toe-tsaina malagasy.
Ilay voalohany moa dia fantatra eran-tany amin'ilay teny hoe "biraokrasia" , na adika amin'ny teny tsotra hoe fandrebirebena sy fanaovana didiko fehy lehibe sy tsindrio fa lavo, na ambany na tsy mahay....Misy an'io dahalo anefa manerana an'izao tontolo izao.Ohatra iray fotsiny tany Ejipta dia nisy olona tsy hita nandritra ny fotoana naharitra ary dia nolazain'ny havany fa maty .Taona maro taty aoriana anefa dia nipoitra rangahy ary nitaky ny fananany , izay efa natao lova nozaraina tamin'ny havana.Ny fanjakana sy ny biraony dia tsy tahotra tsy henatra fotsiny izao fa nitaky taratasy taminy manaporofo fa velona izy. Sahirana ihany izy nitady birao manome taratasy toy izany.
Ny risoriso sy ny fahalalana olona koa anefa tena mandeha any ka dia nahita an'"ilay taratsay izy.
Ratsy dia ratsy tokoa ny biraokrasia ao amintsika ary tena mila fanamboarana hatrany amin'ny fotony. Fa matetika ny lehibe na ny mpifehy no tena mahatonga ny zavatra mitranga toy izany. Ny sefo no tsy mahay mitantana ary ilaina mihitsy ny manara-maso azy ireny , rehefa manome tatitra izy ireny dia tsy maintsy arahina vokatra ny asa ka izay no hitsarana azy .
Ny olona tsotra kosa dia tokony hanoratra any amin'ny manam-pahefana sy tompon'andraikitra ambony , ka raha tsy misy valiny dia tsy misy afa-tsy ny hetsika ataon'ny vahoaka sisa no mety hampiova azy.
Ny resaka toe-tsaina malagasy mampandositra ny nametraka resaka kosa dia zava-misy io, ary izay no maha-malagasy antsika, misy ny tsy mety tsy azo lavina , fa tsy misy kosa ny finiavana hivoatra sy hanova zavatra fa dia samy mionona amin'izay mahazo azy daholo.
Safidy anefa ny fijanonana ho malagasy sy ny fandraisana zom-pirenena vahiny., tsy misy hifanerena io fa dia afaka mifampitso-drano isika .
Posted by: malagasycool at 2009/10/14, 16:28
Posted by: jogany la gentille admin des BOMBS ! at 2009/10/28, 02:37
Благодарна публикатору это на мое усмотрение тоже полезно знать.
Posted by: annalustikova at 2011/11/17, 05:17